वृद्धवृद्धाको जवानी फर्काउने अभियान ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
वृद्धवृद्धाको जवानी फर्काउने अभियान !
सामान्यतः आमा–बाबुको सामु मैथुन त के यौनजन्य कुराकानीसमेत गरिँदैन । तर, अमेरिकाका दुईजना पोर्न कलाकारले भने आमाबाबुसरहका वृद्ध जोडीलाई मैथुनका आसनहरु सिकाउन थालेका छन्, त्यो पनि मातृदिवसको सन्दर्भ पारेर ।
तीन सय ५० भन्दा बढी अश्लिल चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका ३८ वर्षका चाल्र्स डेरा र चेरी डे भिलले त्यस्तो कक्षा सञ्चालन गर्न थालेका छन् । पहिलो कक्षामा ५० वर्ष नाघेका ३५ जोडी सहभागी छन् । चाल्र्स र चेरीले वृद्धवृद्धाको जवानी फर्काउने अभियान हो भनेका छन् ।